Maxaa inoogu Soo Bixi kara Haddaynu ka Gudubno Dhawaaqa aynoo Fidinayaan Kuwa Ku Xasila Qummanaanta Maskax Miiradka? | Togdheer News Network
Maxaa inoogu Soo Bixi kara Haddaynu ka Gudubno Dhawaaqa aynoo Fidinayaan Kuwa Ku Xasila Qummanaanta Maskax Miiradka?
Muhiimad inooma laha inaynu ku baraarugno qalalaasaha qarsoon e, ay fidinayaan dad loo hubeeyay in maanku ay qaawiyaan. Haa, baraarug ka weyn baa jiro oo noo soo saarayo inaynu si xilkasnimo ah, oo jiritaan xaqiiqa ah aan dabar goyn karno. Hubaal inaynu hiraal wacan qorsheysaneyno, laakiin hiraalkaa inoogu ma baahna in aynu isku dhiirigelinno. Dhiiranaantu waxay soo deg-degtaa kolkii loo filan waayo inaynu dejino hiraal gor-gortamayo. Qiyaasta ugu badan oo aynu ka filaneyno udub dhaxaadka nolosha, ayaa ah in nafta loo socod baro cawaaqibta iyo ray-raynta nolosha. Waxaa soo ifbaxo aammintan( wakhtigaan) loo hadaaqayo doqonimo, halkaa looma sawiran karo dulucda saxda, laakiin waa iska yeel yeel loo xariiqay dabar goynta wacyiga naf ahaaneed.
Aammintan duqonimada waa mid laga macaasho si loo soo xeri geliyo agabyada ay adeegsato maskaxda. Sidaa bay isu xilsaaraan gulufyada ku hubeysan raad racaynta kasmo dabar goynta. Aammintan doqonimada waxay isu xilsaartaa sidii bulsho masuul ay ugu noqon lahaayeen, waxayna soo saaraan bulsho u horumartay doqonimada. Halbeegga ay suurta geliyaan doqomada waa ayagoo taariikh unuurta faraca doqomada soo saaraan. Ogow maamuus waliba oo wacan ama xun, tillaabadiisa iyo horjoogiisa waqtiga uu joogo kuma cabbiro, wuxuu ku cabbiraa haykalka taariikheed oo uu boos ka geli karo. Waana astaan maskaxeed loo turxaan bixiyay caqliyadda taariikheed. Aammintan looma socdaalin kasmada naf ahaaneed, ee waxaa loo socdaalay qirashada u bahowday daruusta walbahaarka. Ma cabiro karo sohdimaha iyo filashada ay qorsheeynayaan kuwa uxawaareeya quruxda horboodka aan loo qurxineynin kasmada. Aammintan waxaa xeen daab ku jira fikirka, kolkii fikirka looga baahnaa in caalamka iyo jeerihiisa loo diro. Qof waliba wuxuu wax ku cabiraa isla meesha ama goobta uu joogo, laakiin fikirku farriintiisu ma dhaafsiisna xeen daabkaas. Derbiyada kasmo waxay xaaqdaa, inta ku garasho ah si caqlabiyad ay uhesho.
Waana cubtanka aammintaan ay fulinayaan kuwa u majeertay maamuuska doqonimo. Aammintan waxaa astaan noqotay maamuus loogu socnaado dadka, halkii lagu baraarugi lahaa rog-rogga fikirka si uu baaq diiran usoo saaro. Ammintan maamuuska baa fikirka isbaaro udhigtay, waayo keenni fikirayay wuxuu u tillaabsaday astaan jago. Waana halka ay ku kala gudbaan aqoonyahanka fikirka ugu socdaala bulshadiisa iyo aqoonyahanka ubislaada nafciga jago.
Aammintan waxaa awood sheeganeyso luuqadda, kolkii la doonayey in uu awood sheegto fikirka xorta ah. Qof waliba wuxuu wax ku cabbirayaa hadalkiisa, halkii la doonayey in qaab fikir ahaan wax lagu cabbiro. Gabl dhac waliba fikirku aragti soo ma saaro, halkii gabal dhac waliba la odoroosi jiray, jiritaanka fikirka iyo unuglahaanshaha fikirka. Gabal dhac waliba farriin bay soo gudbisaa cadceedda, farriintaana aammintaan looma fikiro. Cadceedda waxay soo saartaa tashi iyo baaq ay jeceshahay in lagu baraarugu sii socodkeeda iyo in jeceshahay joogitaankeeda, si astaamaha nolosha inoogu tusiso. Waxaa soo xarooganaya waaqicaan xogo aan xaqiiqo ku salaysnayn si loogu baraarugo qiyamka xogtaas ay sidato, halkii loogu baahnaa xog waliba lasoo marsiiyo ilo sax ah. Waana habraac la’aanta aynu ku shaqaleysiinin maanka
3 Qof Oo Ku Geriyoodey Shil Baabuur Oo Ka Dhacey Magalada Burco…….
Qaar Ka Mid Ah Ergooyinka Ka Qeyb Gaalaya Shirka Golaha Dhexe Ee Kulmiye Oo Gadhey Borama
Maxay Somaliland Ka Tiri War Saxafeedki Dowlada Ethopia Ka Soo Saartay Kulanka Labada Dhinac
Ardeydi Ku Guulaystey Bandhigi Sugaaneedki Jamacada Beder Ayaa La Shaaciyey
Football gossip: Zidane, Rakitic, Holland, Ospina, Rabiot
West Ham United 3-1 Fulham: Controversial Hernandez goal helps hosts to victory
Cardiff 1-5 Watford: Javi Gracia proud of 'outstanding' Hornets display
West Ham 3-1 Fulham: Manuel Pellegrini pleased with reaction to going a goal down
Cardiff 1-5 Watford: Gerard Deulofeu scores hat-trick in Watford victory